Kwizona zilungileyo kwi4. Inkomfa ye-GvSIG… -iGeofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Eyona nto ifanelekileyo ye-4tas. Jornadas gvSIG ...
Eyona nto ifanelekileyo ye-4tas. Jornadas gvSIG ...
Uninzi lwabantu luyavuma ukuba phakathi kwezona zinto zifunyenwe kwiintsuku zamva nje iphephancwadi elibhekisele kulo msitho, omele umsebenzi omkhulu kungekuphela nje ngokomxholo kodwa nakwimbonakalo yegraphic. Kulabo bayifumene ngefomathi eprintiweyo, ngokuqinisekileyo imele into yomqokeleli exabisekileyo efana nezo zihlekisi zika-Obelix esizigcina kwitraki endala kodwa entle kwaye isikhumbuza ngesipho esikhulu esivela kutata wethu.
Ukuphonononga umxholo wayo, osele upapashiwe phantsi kweCreative Commons, sinokubona izihloko ezahlukileyo eziphathwe kakuhle ngokubhekisele kuphuhliso lwe-gvSIG, kunye nodliwanondlebe nabantu ababandakanyekayo ekukhuthazeni nasekumiliseleni kuzo zombini iiarhente zemfundo kunye nezikarhulumente. Nalu ushwankathelo lwezinto ezilungileyo:
Bamthiye iminyaka emine yentuthuko, iminyaka emine yethemba; kwaye kungabikho ukudibanisa into enokucingwa ngayo Igama elingelolakho, kuphuhliswa imixholo echaza ngembali eyenzekileyo, okwenziwayo kunye nokuba iprojekthi isinge phi. Eli nqanaba loxwebhu lenziwe ngezi zihloko zilandelayo:
Aba lwenziwa ngononophelo kakhulu, ngoko ndibona sihlelwe ukuba akungenise ukubonakala ukuba iprojekthi ufanele nokuba kunyaka ophelileyo kubonakala ukuba ndibeke eninzi umgudu, kubalulekile ukuba siqaphele ukuba umsebenzi wakhe zephephandaba yonxibelelwano.
Nantsi ndiza kufutshane nabanye abathandabuzayo ukuba nje ndikhange umdla.
UJuan Ernesto Ricket
Ingcali kwi-IDES, njengangoku eyiNtloko yeThekhnoloji ye-Military Geographical Institute e-Argentina kunye nomququzeleli weprojekthi ye-PROSIGA. Ku dliwano ndlebe UCarlos Figueira Abantu baseVenezuela bathetha ngokubaluleka kokusetyenziswa kwesoftware yasimahla kumaziko karhulumente, ngakumbi oomasipala abakwinqanaba elilinganiselweyo lezoqoqosho. Siyaqondakala isizathu sokuba iNkomfa kaSeptemba 2009 ibe seArgentina.
ndlebe umdla kakhulu, apho Ifowni ifowna umbhalo isikhumbuza ukuba kuphela bill Microsoft yezigidi 800 zeerandi ngonyaka Latin America, ukuze software free asinto nje indima ebalulekileyo kuqoqosho koorhulumente kodwa ukulwa ezinye ubuqhetseba obuye buchazwa ngeentsuku sibukeka njengeAfrika.
Ezayo Chris Puttick Bathetha ngendlela yaseYurophu malunga nokusetyenziswa kwesoftware yasimahla kwiindawo zikarhulumente, kunye nokusasazwa kwabo kufuneka babandakanyeke. Kuyimfuneko ukuba uAlessandro udlale indima ebalulekileyo (ukuba ayingabo bonke) kuguqulelo lwase-Italiya lweencwadi ze-gvSIG.
Antoni de la UOC Ithetha ngokuba isoftware yasimahla kufuneka ikhuphisane njani nezinye iintengiso ezinje nge-INTERGRAPH kunye ne-ESRI eneenkqubo zokusebenzisana neeyunivesithi ezahlukeneyo. Ikwajolise kwimiba yokuziphatha, yezopolitiko neyoqoqosho elawula kumaziko emfundo ukukhuthaza izisombululo zokusebenzisana ezifana nesoftware yasimahla nalapho Abafundi beekholeji banakho ukuzonwabisa.
Udliwano-ndlebe lubanzi, kunye kunye Lluís Vicents kwiqela leNkosi ye-UNIGIS, ukubonakalisa kakuhle kunye neminikelo evela kwinqanaba leyunivesithi libhema.
Kusondele ekugqibeleni udliwano-ndlebe naye Juan Antonio Bermejo uyaqaphela kutheni bafika ekukhetheni gvSIG njengesixhobo abasebenza kwiiprojekthi ezinxulumene Information Geographic Isiqithi Council of La Palma, baya nokufunda ezinye iingcebiso ukuba eze ukuze kuxhamle imihla iyeza.
Yenzela ntoni, imagazini ilunge kakhulu. Ekugqibeleni bathetha ngeendlela ezinokuthi zibonwe kwiwebhu ngokubhekisele kwi-gvSIG, phakathi kwabo isicelo sikaGoogle esibizwa ngokuba yi "Insights", esibonisa ukukhula okwenziwe ligama le-gvSIG kunye namazwe emvelaphi ngokusekwe kumagama aphambili.
Ke nakwindlela esetyenziswayo kaGoogle, babonisa indlela ukukhula okuye kwaziphatha ngayo ngokubhekisele kwimigaqo yokhuphiswano enje ngeGeomedia, ArcView, Mapinfo kwaye uya kumangaliswa kukubona iigrafu zibonisa. Okwangoku ndiyishiya ipike, jonga ikhasi le-gvSIG kuba andicinga ukuba kuthatha ixesha elide ukuba ne-pdf version yokukhuphela ukuba bayithatha njengento yokudala.
I-Bentley Cadastre, i-Schema wizzard
I-Geofumadas, inyanga, isithuba
Ingxaki yedatha eyimfuneko yendawo yeyona ndawo ingxaki enkulu e-Argentina. Ukuthi yonke into ehlawulwa ngandlela-thile ingahle iphosakele ukuyiphatha isifundo ngendlela elula kakhulu.
Ngelishwa e-Argentina, ukuveliswa kwedatha kuhlawulelwa ngemali. Xa sijonga layo le 1 data: 250.000, idatha portal PROSIGA i IGM, uninzi lwezi data uye emva kwiminyaka 30, 40, 50. Nkqu 250.000 ukuba idijithali a lot of umgudu ngexesha 96-98 ayinayo unxulumano ngoku. Akukho nto enye efumanekayo ukususela ngelo xesha ngenxa yokungabi nakwimali. Ndiyazi ukuba abaninzi abantu baye bafaka umzamo, ixesha nemali ABANTU ukugcina ezo nkcukacha ezingagcinwa amashumi eminyaka. Kwelinye icala, FDI imele umgangatho kunye noxanduva, oku kuthetha ukuba umzimba yenza ekhoyo le datha kufuneka enze njalo kunye nolawulo olufanelekileyo umgangatho, ukwenza amaxwebhu afanelekileyo, ukuchaza Ipharamitha usetyenziso, njl, njl, njl ke nakuba ukukholwa, yonke into ephuma intywenka yemali, imali ukuba urhulumente na imali ukugcina loo nkcazelo, singasathethi ukujikelezisa idata ezifuneka kakhulu.
Eli phephancwadi lingalayishwa kwiwebhu
Ndisayikhumbula ukuba engenangqondo zokubhatala (andizange ukukhumbula indlela) nefotokopi uphengululo geodesic kwigqiza evela babela, xa kwiminyaka emininzi eyadlulayo ukuba sele ithunyelwe kwi web.
Ngenye indlela, ukuba unomdla izihloko geodata ezamahala, ungenza uyeke kuluhlu OSGeo-es , kukho iqela labantu ukuqokelela iinkcukacha kucwangcisa isafumaneka lula kwaye ngokubanzi ukuba wayesebenza kuloo ndawo .
Ngeentsuku, ngokuqinisekileyo oko kwakufuneka kuthintele isihloko kwezinye zeziboniso. Kulo phephancwadi, ngokuthe ngqo, nguPhris Puttick kuphela othetha ngento encinci, xa ebuzwa malunga nenxaxheba yesofthiwe ye-free in administration (Ikhasi 20)
Sawubona, into enye: ngaba kukho umntu othe wathetha ngesicelo seGvSIG sokwenza i-geomarketing? kukupapasha into ebhekisela kwiblogi yam xa iphephancwadi ye-pdf yenkomfa.
Gerardo Paz uthi:
U-Juan Ernesto uthetha ngeprogram, andazi ukuba lithetha ntoni ngokusasazwa kwedatha mahala.
Le ngxaki ubhekisela kuzo jikelele malunga neliphi ilizwe ehlabathini ngaphandle kwe-United States neCanada, kunye nezinye iimeko ezihloniphekileyo.
E-Spain ubuncinci sele sifikelele kugqithiso lwedatha ekusetyenzisweni okungekho kwezorhwebo ngabavelisi abathile beemephu (IGN, Catalonia, Murcia,…) kodwa kusekho indlela ende yokuhamba ukuze ufumane idatha yasimahla. Ngethamsanqa ubuncinci sele sinayo le software. 🙂
Ngamanye amazwi, aba bantu, abaqeshwe ngurhulumente, esebenzisa oMbuso Argentina ukwenza imisebenzi yabo, kwaye kubonakala ukuba asindise kakuhle abo izibonelelo usebenzisa software free, inkunkuma kuluntu ngokukhululekileyo ukulanda idatha. Ndiyaqonda ukuba imephu eprintiweyo ineendleko. Kodwa ukuveliswa kwedatha yedijithali KUNYE KWAKHLAWULWA, ngokuchanekileyo uhlahlo lwabiwo-mali olunikezwa yi-Ardenica State ukuya kwiziko.
Thatha umzekelo waseKhanada, ongafuni nokuba umntu abe waseKhanada ukufumana idatha yelizwe….
Kufakwa gvSIG Mobile